5 Cunnooyinka leh Terpenes oo sare u qaadi kara xashiishkaaga • Dawooyinka Inc.eu
5 cunnooyin leh terpenes oo kor u qaadi kara xashiishadda sare
Terpenes waa mowduuc aad u kulul adduunka xashiishka. In kabadan 100 nooc oo terpenes ah, saliidaha udgoon ee dhirta udgoon siiya, ayaa laga helay xashiishad. Waxay ka soo baxaan qanjidhada ubaxa ubaxa, ku xiga THC en CBD, laakiin iyagu kuma gaar aha xashiishadda. Terpenes waxay ku badan yihiin miro iyo dhir badan.
4 Baradho macaan
Sida oo kale cannabinoids, terpenes ayaa la rumeysan yahay inay saameyn ku yeeshaan khibrada xashiishka iyagoo ku xiraya qabtayaasha maskaxda, dhowr terpenes waxay bixiyaan faa'iidooyin daaweyn oo kala duwan. Cunista cuntooyinka hodanka ku ah terpenes iyo omega-3 asiidh dufan sidoo kale waxay saameyn ku yeelan kartaa sida jirkaagu ula falgalo xashiishadda, sida lagu sheegay cilmi baaris lagu daabacay Joornaalka Mareykanka ee Daraasadda Tarjumaadda.
Inkasta oo qof kastaa leeyahay nidaam gaar ah oo loo yaqaan 'endocannabinoid' oo khibrad u leh xashiishadda si ka duwan, liistada shan cunto oo, sida laga soo xigtay sayniska, laga yaabo inay awoodaan inay sare u qaadaan heerkaaga ayaa la daabacay.
Cuntooyinka dufanka leh waxay jirkaaga ka caawin karaan inuu soo nuugo cannabinoids sida THC iyo CBD si dhakhso leh.
"CBD iyo THC xeryahooda waa baruurta milmi kara, sidaa darteed dufanka ayaa ah midkooda dhexdhexaad ah," ayuu yiri Kelly Dorfman oo ah khabiir ku takhasusay nafaqada. "Haddii aad ku cunto cunnooyinka ay ku jiraan dufanka, si fiican ayey u nuugi doonaan - sida ay fiitamiin E guud ahaan si fiican u nuugaan marka loo qaato qaab saliid ah."
Lowsku waa ikhtiyaar caafimaad leh oo dufan badan oo laga yaabo inuu kaa dhigo mid waxoogaa ka sarreeya isla markaana ilaaliya wadnahaaga. Isku soo wada duuboo dufanka caafimaadka qaba ee lowska ayaa hoos u dhigi kara garaaca wadnaha isla markaana faa iido u leh kuwa leh dhibaatooyinka wadnaha iyo xididada.
Cambaha waxa ku jira myrcene, oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee xashiishka ku jira. Myrcene ayaa la sheegay inuu leeyahay saameyn nasasho. Haddii aad cunto cambe qiyaastii saacad ka hor intaadan cunin xashiishka, ujeedku waa in la diiriyo kuwa ku soo dhoweeya xashiishadda oo aad diyaar u ahaato inaad ka baaraandegto xashiishka si hufan.
Cambaha waxa ku jira myrcene, oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee xashiishka ku jira.
“Myrcene waxaa la muujiyey inay kordheyso heerka ugu sarreeya ee soo dhaweynta CB1, taasoo soo saareysa saameyn weyn oo maskaxeed. Dadka badankood, cunista cambaha cusub waxay qaadan doontaa 45 daqiiqo kahor daawada neefsashadaiyo xashiishka, waxay ku dhalataa bilawga dhaqsaha maskaxda iyo xoogsaarida. “
Horeba mid ka mid ah waxyaalaha caafimaad ee aad cuni karto, broccoli waxaa ku badan bir, magnesium, selenium, fiber, iyo xitaa borotiin, waxayna bixisaa fiitamiino badan oo kala duwan. Broccoli sidoo kale waxaa ku badan beta-caryophyllene, terpene caan ku ah xashiishka. Labada oo la isku daro waxay horseedi kartaa deganaan. Muruqyada sare ee beta-caryophyllene ayaa sidoo kale yareyn kara xanuunka iyo caabuqa.
Xitaa ka hor intaadan ku darin xashiishka isku dhafka, baradhada macaan ayaa kaa caawin karta hagaajinta niyaddaada adoo kordhinaya wax soo saarka serotonin. Laakiin marka lagu daro xashiishka, saameynta euphoric ee ubaxu wuu sii xoogaysan karaa.
Baradhada macaan ayaa ah isha weyn ee laga helo fiitamiin E, nafaqo door muhiim ah ka ciyaara caafimaadka maskaxda iyadoo ilaalinaysa wadnahaaga. Sida laga soo xigtay Mayo Clinic Faytamiin E sidoo kale wuxuu leeyahay astaamo antioxidant.
Marka laga hadlayo antioxidants, shaaha waxaa lagu cabiray qaab flavonoids ah, oo sidoo kale laga helo xashiishka.
Polyphenols ama flavonoids ayaa laga yaabaa inay qayb muhiim ah ka yihiin waxa shaaha ka dhigaya cabitaan caafimaad qaba, ayuu yidhi Iskuulka Caafimaadka Bulshada ee Harvard. Kuwani kiimikada kiimikada ah waxay u shaqeeyaan sidii antioxidants, oo xakameynaya saameynta xun ee xagjirnimada bilaashka ah ee jirka. "
Marka lagu daro xashiishka, antioxidants-ka ku jira shaaha waxay u wareejin karaan khibradaada xashiishka xagga dajinta iyo nasashada. Shaaha xashiishadda ayaa caan ka ah adduunka oo dhan waxaana la rumaysan yahay in dawadii ugu horreysay ee diiwaan gashan ee xashiishad, 2737 BC, ay ku timid qaab shaah lagu darey xashiishad.
Ilaha ay ka mid yihiin GreenState (EN), Namaste (EN), PotGuide (EN), TheGrowthOp (EN)
Tirada diiwaan gelinta xashiishadda dawada ee Kanada ayaa sii kordheysa inta lagu jiro aafada
Tirada diiwaangelinta firfircoon ee xashiishadda caafimaadka ee Kanada ayaa si xawli ah u kordhay rubucii la soo dhaafay ...